किन अल्झियो बाम एकता ? ज्योतिष शास्त्र भन्छ– ओलीलाई राजयोग,प्रचण्डलाई दशा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाम एकताका लागि कस्सिए पनि यसको निचोडका सम्बन्धमा अल्झिएका छन् । विहीबार दुवैले अनौपचारिक भेट गरेका छन् तर एकताको हलो जहाँको त्यहि अड्कीएको छ । यो नियमित अनौपचारिक भेट हुँदाहुँदै पनि एकता किन अघि बढिरहेको छैन ? यी दुवैको स्वभावले किन साथ दिइरहेको छैन ?
कुण्डलीका हिसाबले दुवै शक्तिशाली ठहर भएका छन् । उनको छुच्चो बोलीको कारण बुधसँगै राहु बस्नु हो । उनमा जोसँग पनि मिल्ने र सहयोगी भावना विद्यमान छ । उनको कुण्डलीमा राजयोग विद्यमान छ, यसै कारण उनी मुलुकको उच्चस्थानमा पुगेका हुन् ।
उनलाई मित्रजनको भरपुर सहयोग मिल्ने देखिन्छ । विद्यामा भने उनी कमजोर छन् । स्वास्थ्यको मालिक मंगल पञ्चम स्थान अर्थात् शत्रुगृहमा हुनुले उनको स्वास्थ्यावस्था अस्थिर देखिन्छ ।
कुण्डलीअनुसार उनको विदेशसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, नजिकका देशबाट विशेष लाभ प्राप्त हुन्छ । उनलाई छिमेकी देशबाट आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहयोग यथेष्ट मिल्न सक्छ । ०६९ देखि योगिनीअन्तर्गत ७२ साल फागुन ११ गतेसम्म सिद्धा दशा चलिरहेको थियो । उनको अहिलेको ग्रहदशा ठिक रहेको कुण्डलीले देखाउँछ । उनी मकर राशी हुन् ।
यता, प्रचण्डलाई ज्योतिष विज्ञानले चानचुने मानेको छैन । प्रचण्डको सिंह लग्नको स्वभाव र त्यसको विश्लेषणले नेपाली राजनीतिमा उनलाई ‘आँटी’ नेता भन्नुपर्छ । कुण्डलीअनुसार लग्नको स्वामी मित्रघर र केन्द्रमा रहनुका साथै बुधादित्य योग देखिन्छ । यसले गर्दा उनलाई साहसी, पराक्रमी र ‘टेक्निक’ मा सबल देखायो ।
प्रचण्डको कुण्डलीमा राजयोग प्रस्ट देखिन्छ । र, उनमा राष्ट्र प्रमुखसम्म बन्न सक्ने सम्भावना छ । राजनीतिमा धेरै सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि उनलाई झ्वाट्ट रिसाउने बानीले ‘टेन्सन’ सिर्जना गर्दछ ।
कूटनीतिक सहयोग उनलाई राम्रै देखिन्छ । बाह्रौँ स्थानमा रहेको उच्च स्थानको बृहस्पतिले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा समुद्रपारिको मुलुकसँगको वैदेशिक सम्बन्ध उनको अनुकुलमा देखिन्छ । आफ्ना नजिकका इष्टमित्र, परिवार, साथी र सल्लाहकारको सहयोगविना उनी अधुरो देखिन्छन् । शत्रु उनको अगाडि निरीह देखिन्छ ।
उनलाई वाककलाले सहयोग गरेकै छ । उनको वाक क्षमताको कुण्डलीसँग भारतका चर्चित व्यक्तित्व महात्मा गान्धी र इन्दीरा गान्धीको कुण्डली पनि मेल खान्छ । आर्थिक सबलताका लागि उनलाई कुण्डलीले सपोर्ट गरेको छ ।
कुण्डली पूर्ण मांगलिक भएको कारण उनलाई पत्नी तथा सन्तानबाट सुख मिल्न सक्दैन । कुण्डलीको पञ्चमस्थानमा राहु बस्नु र शनिको पूर्ण दृष्टि हुनुले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । यिनी धार्मिक स्वभावका व्यक्ति हुन सक्दैनन् । भाग्यस्थानको अधिपति मंगल र शनिको दृष्टि निचघरमा रहेकोले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
षड्यन्त्रकारी राहुलाई शनिको दृष्टि भएको कारण प्रचण्डको नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’ भएको ज्योतिषीय विश्लेषण छ । ५२ साल फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने समयमा उनलाई उच्च बृहस्पतीको दशा चलिरहेको कारण विदेशी र साथीभाइको सहयोग प्राप्त हुन सकेको थियो ।
प्रचण्डलाई यो समय शुभ ०६९ सम्मको समय ठिक थिएन । ७० साल बैशाख १३ गतेसम्म विंशोत्तरी दशाअन्र्तगत केतुको अन्तरमा चन्द्रमाको दशा थियो । यस्तै ७५ साल मंसिर १५ सम्म सिद्धाको दशा छ । केतु निच भएको कारण उनको बुद्धि भ्रष्ट हुने, टेक्निकहरू फेल हुने तथा साथीभाइसँग सम्बन्ध बिग्रने देखिन्छ । ज्योतिषीय हिसाबले हेर्दा उनले सहमतिका लागि नेतृत्व नगरेकै बेस देखिन्छ ।
ओली मकर र प्रचण्ड मिथुन राशी हुन् । यी दुई राशीको कहिले पनि मेल नखाने, एकअर्काकासँग नमिल्ने ज्योतिषशास्त्रले देखाउँछ । मकर र मिथुन एकअर्काका मित्र राशी होइनन् । मिल्न खोजे पनि फरक राशीको प्रभावका कारणले कुरा भाँडिनसक्ने ज्योतिष शास्त्रले देखाउँछ ।
ज्योतिष शास्त्रको आधारले बाम एकतालाई समस्यामा राखेको छ । ०७५ मंसिरसम्म ओलीको राज योग र प्रचण्डको सिद्ध दशाका कारण मान्ने हो भने एकता होला ? अथवा, ओली एक्लै सत्तारोहणमा बस्लान् ? त्यो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि देखाउँदा जानेछ ।